Ma jiri doonto ArcGIS 9.4 - Geofumadas
Ma jiri doonto ArcGIS 9.4
Janaayo, 2010 ArcGIS-ESRI
Mid ka mid ah saadaalinta waalidkay sanadkan 2010, waxaan sheegay in uu shakiyey ESRI dhicin in la sameeyo version ah la 9.4 magaca, iyo dhab, waxaa la sheegay in version soo socda waxaa loogu yeedhi doonaa ArcGIS 10, oo laga heli doonaa qeybtii labaad ee 2010.
Meelo badan ayaa waxay ahayd comentado, waana taas sida ku cad waxa ESRI u sheegay, tani waxay noqon kartaa isbeddel weyn oo aan ahayn kaliya shaqooyinka (magac) laakiin dhexgalka userka (wajiga). Waxaan u maleyneynaa in qaar ka mid ah aad u wanaagsan, inkasta oo runtii saxiibada tartanka, Dunida Furan iyo isticmaalayaasha horay loo yiqiin (labadaba) way ku dhaleecayn doonaan iyagoo leh: Oo aynaan sidaa samayn oo annaguna?
Markaa dadka isticmaala waxay isticmaali doonaan Ugu dambeyntii! waxaan samayn kor caan ku yeelan doonaan si ay u sameeyaan horumar ah (ka hor iyo ka dib), inay ogaadaan in isbedelka semeje 3x 8x ah ayaa talaabo u qaaday si loo hubiyo in ay gelinno 64; Dabcan, qaar badan oo ka mid ah buugaagta hadda jira ayaa hoos u dhigi doona taariikhda waqti gaaban. Laakiin meelaynta aduunka ee ESRI, waxaa jiri doona farxad weyn, inkastoo ay hal-abuurnimo (oo) Nuguma habboona inaan ku loodiyaan si daal qanacsanayn user ah.
- Helitaanka qalabyo badan. Waxay u badan tahay in, sida aan ku aragnay ArcExplorer, AutoCAD iyo Xafiiska, isku xirxirida Ribbon ee loo yaqaano Ribbon si loo xayeysiiyo qalabyada, ka takhalusidda qalabka gawaarida dabacsan iyo khafiifinta yar ee qalabka beeraha.
-In lala galo ArcCatalog. In qalabkani uu si gaar ah u socdo badanaa wuxuu ahaa jiidis, mararka qaarkood waxay qaadataa wakhti si loo furo iyo marka ay culus tahay inaanan u baahnayn. Hadda waxaa lagu dhexdhexaadin doonaa isku-shaqaynta shaqada isla markaana laga yaabo in uu ku jiro AutoCAD Civil 3D iyo inuu u wareego AutoCAD Map interface; sidoo kale waa inaan aragnaa hadii aad hagaajin kartaa in wax aad looga xumaado ay helaan hal-user xogta si ay u isbedel ku gedoatabase samayn kartaa oo aan haysan inay ku dhow dahay lakabyada eedeeyay (edition xitaa aysan firfircoonaan, taas oo waa in aan u baahan ArcSDE) .
-In la hagaajiyo raadinta khariidadaha. Waxaa la rajeynayaa in uu helo qaab wanaagsan oo ah raadinta xogta miisaanka ama mowduucyada, iyada oo aragti hore iyo farsamoyinnimo culus. Waxaa laga yaabaa inay arrintaani fiirinayaan siyaabaha loo adeegsado qalabka sida uDig iyada oo buugiisa cajiibka ah iyo jiitaa iyo bahalka.
- Kala soocida geedi socodka. Illaa iyo hadda waa kala badh in yar, inkasta oo konsole uu fuliyo geedi socodka waa lagama maarmaan in la raadiyo qaxwada sababta oo ah in aan la samayn karin asalka. Sababtaas, waxay u maleynayaan inay tixgelinayaan sida ay taasi u dhacday qgis iyo uDig, ka dibna waxaad samayn kartaa habab isdaba joog ah oo aan si fudud loo dhexgalin shaqada desktop.
- Dhammaanteen waxaan rajeyneynaa in qalabka wax laga beddelayo si loo hagaajiyo, inkastoo tan la yiraahdo wax yar, kaliya waxay ku saleysnaan doonaan gawaarida caadiga ah ee aan caadiga ahayn ee hadda. Kuwani waxay ku badan yihiin ArcMap, ArcScene iyo ArcGlobe. GvSIG fadlan!
Marka la eego wax soo saarka, hagaajinta ayaa lagu soo bandhigay isbarbar-dhigista boggag badan iyo qoraalo firfircoon. Waxa kale oo loo tixgeliyey suurtogalnimada soo saarista xayawaanka oo ka tarjumaya isbedelka wakhtiga, waxyaallaha yaryar ee Manifold GIS.
-In maaraynta liisamada, in ay suurtogal tahay in la baaro lana ogaado ruqsadaha, waxa loola jeedaa in aad kaadhka shatiga ka saari kartid laptop-ka si aad ugu isticmaasho berrinka. Sidii Bentley Map ay samaysay.
Ka dibna ka hadal waxqabadyo kale si markaa geedi socodka qaar loo isticmaalo ma aha oo kaliya sigaar cabbin: fududee API iyo nidaamyada geocoding, intaa ka badan (fududahay in la isticmaalo), Taageerada 64 iyo waxyaabo kale. Laakiin ma jirin wax hadal ah oo mudnaansiin ah.
Dhab ahaan, ma aha ArcGIS 9.4. Dhammaantood waxay u muuqdaan inay yihiin isbeddello aad u wanaagsan, oo ka yimid kuwa isticmaala qalab kale oo la tashanayo: Muxuu barnaamijkani yar yahay?, oo leh kala duwanaansho ah halkii ay xaq-darri lahaayeen, aragtida user-ka ayaa la maqlay. Sida iska cad ma ahan oo keliya nuqul waxa qof kale si wanaagsan ayuu falaa, waxaa la hubaa laba dabaq ah breaking qumbaha ah si loo arko haddii hadalka Podcast ay qorshe sanadeedka hawlgalka ayaa dhismaha bedelay.
... wakhti fiican, filo laba sanadood oo tijaabo ah ka hor intaanay gaadhin niyadiisa jacaylka.
Oo bal yaa sugaya?
Bentley Systems ESRI GvSIG OS GIS kala cayncayn ah QGIS
Post Previous«Previous Beddel midabka asalka ah: AutoCAD ama Microstation
Post Next CAD, GIS, ama labadaba?Next »
4 Jawaab ayaa ah "Ma jiri doonto ArcGIS 9.4"
Maqaar leh cirrid isagu wuxuu leeyahay:
Janaayo, 2010 at
Haddii ESRI si weyn u wanaajiyo doorashooyinka edbinta (pseudoCAD) waxay heli doontaa wax badan. Fikradayda, waxay ka mid tahay waxa yar ee ay ka maqan yihiin, oo ay weheliso faallooyinka.
Waan oggolahay Waxyaabaha Linux waxaan u arkaa inay adag tahay muddada gaaban, laakiin waxa la sameeyo qalabka dhismaha iyo fekerka fekerka ee qaabka CAD ma arko sabab aan xilligan aan wali ku qasbanahay inaan ku qabanno bannaanka.
buuggan isagu wuxuu leeyahay:
... waxaan halmaamay wax aad iyo aad u muhiim ah ... rajeynayaa ordi karaan ArcGIS (qalab ESRI iyo) on Linux ... iyada oo aan la isticmaalayo emulators. Tan iyo markii aan isticmaalo Güindous waa kaliya, maxaa yeelay waxaan haystaa 90% waqtigeyga ESRI.
Xoog iyo sii wado GEOFUMING !!!!!!
Waxa aan rajeynayo, wax walba ka sarreeya:
1.- Ka dhig mid deggan
2.- Inuu haysto xoghayaha xogta, waxyaalla badan oo loogu talagalay xulasho aad u sahlan - marka - laga soo bilaabo, u muuqda in la sameeyo dameer. Inkasta oo 8.x versions ay ku fiicnaadeen 9.x versions, ma aha la dareemi karaa xulasho fudud marka la barbar dhigo 3.x jir ah ...
3.- Waxaad soo sheegtey qaab-dhismeedka, kaas oo aan ka helayo waxtar, meel kasta oo aad eegto.
4.- Qalabka nadaafada (miisaanka) Waxaan ogaaday in ay wali ka maqan yihiin qaar ka mid ah hababka si ay u sameeyaan dib u habeyn degdeg ah oo aan, ku dhaw, hal mid.
Inta kale ayaan ku raacsanahay dhammaan wixii qadarin ah ... (dabcan ... Ma aanan taaban UDig, markaa ma isbarbar dhigi karo)
In aan kiiska, waxaan rajeynayaa in aan si cad loo bedelo Autodesk (ama in ay dhacdo isticmaalaya Microstation Bentley.) Ee dib u eegista design adag ... laakiin waxa uu noqon lahaa fiican.
Waa hagaag ... Waxaan la joogi doonaa version 9.3 illaa 2012 ... haddii Maya aan si kale noo sheegin